Muxuu kadhignaa shirkii 5-ta saacadood Godey kasocday?. | ogaden24
Muxuu kadhignaa shirkii 5-ta saacadood Godey kasocday?.
Mar 14, 2019 - Aragtiyood
Waxaa dhaliilo is daba Jooga oo aad u culus loo Jeedinayaa shirkii lagu sheegay wadatashiga xukuumada, xisbiga iyo waxgaradka deegaanka, kaasi oo 5-saacadood oo Galinkii Hore ee maalintii Isniinta ah kasocday magalada Godey waxaana u Jeedada shirkaas Qormo Gaabo ku bayaaniyay Aqoonyahan Faisal Rooble oo kamida Aqoonyahanka deegaanka Somaalida.
Shirkan Godey lagu qabtay kama dhigna mid qabiil gaar lagu horu marinayo ama loogu danaynayo. Kamana dhigna mid Dib u- heshiisiin dhab ah lagu raadinayo. Waa shir lagu sifayn karo wax Soomaalidu u taqaan “igu sawir.”
Waxaaan la qaabaa fakirka PM Abiy ee ahaa dib u heshiin waa marka aad nabad ka raadiso ama aad la heeshiisid cidii aad is diidanaydeen, oo isa saamaxdaan. Waa hadalkii uu PM Abiy u sheegay madaxda xiligii uu kuwa agaarka ah la kumay bishii hore dhamaad-keedii.
Waxa Godey lagu hayaa ma aha in la rabo in dib la isugu keeno Soomaalida sii kale fogaanaysa. Waa shir iska maalaayacni ah. Lacagta meeshaas iyo kuwo kale ba lagu kharash-gareeyey waxa fiicnay in dadkan taabaalaysan ee deeganka wax loogu qabta.
Waa in Moyaale nabad buuxda heshaa; waa in xukuumado xinka joojisaa oo Tuliguuleed miisaaniyada ay kaga fadhiisatay u sii daysaa; waa in ay rer-Sitti habeenkii nabad ku seexan karaan.
Waa in kharashkan la qasaarinayo Qolaji wax loogu qabtaa. Waa in Jarar, Qoraxay, Dhanaan, iyo meelaha kale ee haraadku dilay biyihii ay quudarayn jjireen loo soo celiyaa; waa in deegaanda Somaalida Jigjiga, Doolow iyo ilaa dagmada ugu yar lagu soo talaalaa eex la’aan iyo xaq soor maamul. Waa in aan rer-Awbare dhagaha laga xidhan oo la dhagaystaa.
Masuuliyad ayaa Dawlad Deegaanka ka saa ran in abaabul xoogan la galo si aan Soomaalida deegaanka lagu minja xaabin Tirokoobkan siyaasadaysan. Iniga oo xiganayay Marxuun Abdi Xoosh oo saaxiobkay ahaa, “ma hadel leen wadaynaa!” Waa in umadan wax loo qabto.